WARBIXIN: Xiddigaha Bartilmaameedka U Ah Kooxaha Reer Yurub – Kooxda.com
HomeSuuqaWARBIXIN: Xiddigaha Bartilmaameedka U Ah Kooxaha Reer Yurub
WARBIXIN: Xiddigaha Bartilmaameedka U Ah Kooxaha Reer Yurub
July 24, 2019 Kooxda Suuqa, Wararka Maanta, Warbixino 0
Inkasta oo ay haatanba dheceen heshiisyo waaweyn xagaagan koox kasta oo ka mid ah yurub ayaa wali suuqa ugu jirta xiddigo kale oo ay ku xoojiso kooxdooda inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga xagaagan.
Kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa ilaa haatan ah kooxaha saxiixyada ugu sameeyay suuqa kala iibsiga xagaagan laakiin kooxaha ayaan halkaas ku joogsan doonin.
Hadaba wargayska MARCA ayaa warbixintan ku eegay xiddigaha ay doonayaan kooxaha ugu waaweyn qaarada yurub inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga xaaagan.
Los Blancos ayaa si xoogan u gashay suuqa xagaagan bilowgiisii iyaga oo xiddigihii ay doonayeen helay laakiin waxa ay doonayaan in ay hal xiddig oo khadka dhexe ah ku soo daraaan kooxda waxana ay isha ku hayaan saxiixa Pogba.
Kadib markii ay haatanba la soo saxiixdeen xiddigaha Antoine Griezmann, Frenkie de Jong Iyo Neto Barcelona ayaan u baahnayn xiddigo badan xilli ciyaareedka cusub iyaga oo raadinaya xiddig ay la tartansiiyaan Jordi Alba iyo waliba Neymar oo ay wali ka fiirsanayaan in ay u dhaqaaqaan adeegiisa.
Kooxda ku guulaysatay horyaalka premier League ayaa daadinaysa in ay xoojiso daafaceeda iyada oo lala xiriirinayo xiddigaha Harry Maguire & Kalidou Koulibaly halka sidoo kale lala xiriirinayo daafaca Midig ee Joao Cancelo.
Paris Saint-Germain ayaa si aad ah u doonaysa Goolhaye ka hor inta ayna xidhmin suuqa xagaagan waxana lala xiriirinayaa goolhayaha Ac Milan ee Gianluigi Donnarumma hadii ay iibiyaan Neymar waxa ay sidoo kale uga baahan doonaan Barcelona xiddig dhanka kale ah.
Kooxda ku guulaystay horyaalka Bundesliga xilli ciyaareedkii hore ayaa raadinaysa xiddigo ka ciyaara garabaha weerarka si ay ugu buuxiso booskii ay baneeyeen halyeeyada Frank Ribery & Arjen Robben waxana lala xidhiidhinayaa xiddigaha Leroy Sane & Ousmane Dembele waxa ay sidoo kale xiiso u qabaan dhawr xiddig oo khadka dhexe ah.
Tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa laftiisu xaqiijiyay in uuna filayn saxiixyo waaweyn xagaagan laakiin Reds ayaa la socota dhawr xiddig iyaga oo u dhaqaaqi doona hadii ay is badasho xaaladoodu.
Diego Simeone ayaa haatanba sameeyay saxiixyo waaweyn oo kooxdiisa ah waxana uu doonayaa in uu ku soo daro xiddig kubad sameeye ah oo khadka dhexe ah.
Kooxda Juventus ayaa ku waalan ku guulaysiga champions League waxana ay haatanba kooxda keeneen xiddigaha Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey & Adrien Rabiot waxana ay la socdaan horumarka xaalada Paul Pogba kaas oo doonaya in uu ku laabto Italy.
Zidane: Bale Si Fiican Ayuu U Ciyaaray Aadna Waan Ugu Faraxsanahay.
Warar Hordhac Ah Oo Laga Helay Dhaawacii Halista Ahaa Ee Soo Gaadhay Asensio